मेगा बैंकका अर्यालको रहस्यम मृत्युः मृत्युको कारण खोजिदै | Citizen Post News
मेगा बैंकका अर्यालको रहस्यम मृत्युः मृत्युको कारण खोजिदै
२०७४ असोज १ गते १९:३५
काठमाडौं, १ असोज । मेगा बैंक लिमिटेडमा कार्यरत सुरभ अर्यालको अचानक मृत्यु भएपछि बैंकमा हलचल छ । अर्यालको मृत्यु पछाडि बैंकका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरुको समेत हात रहेको बैंकभित्र चर्चा चलिरहेको छ । रसुवाको स्वाफ्रुवेसी शाखामा कार्यरत अर्याल बुधबार राति आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । उनको मृत्यु बारे अहिले धेरै अड्कलबाजी हुन थालेको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनको मृत्य’ हर्ट अट्याक्क’ का कारण हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । तर मृत्युको पक्का कारण भने अझै नभेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय रसुवाले जनाएको छ । बुधबार मृत भेटिएका अर्यालले मंगलबार दिनभर आफ्नो कार्यालयको काम गरिरहेका थिए । ‘राती आफनो कोठामा सुत्न गएका अर्याल कार्यालय नआएपछि कोठामा गएर हेर्दा उनको मृत्यु भइसकेको थियो ।’–बैंकका कर्मचारीहरुले भने । उनको शवलाई विहिबार अबेर बेलुका मात्र काठमाडौं ल्याइएको थियो । अर्यालको एक्कासी मृत्युको खबरले भने मेगा बैंकमा हचलल भएको छ ।
अर्याल मृत्युको कारण खोजिदैः
३० बर्षीय अर्यालले नबिल बैंकबाट जागिर सुरु गरेका थिए । मेगा बैंक सुरुवात सुरु हुने भएपछि नविक छाडेर मेगामा आएका थिए । पारिवारीक स्रोत भन्छ,‘एक बर्षअघि मेगा बैंककी डीपुटी सीइओ अनुपमा खुन्जेलीले व्यक्तिगत रिसीइबीका कारण अर्याललाई स्याफ्रुवेसी शाखामा सरुवा गरेकी थिइन ।’
सरुवाप्रति असन्तुष्ट जनाउदै मृतक अर्यालले प्रत्येक हप्ता काठमाडौं आएर एच्आर म्यानेजर राजेन्द्र सुवेदीलाई भेट्दै काठमाडौं सरुवा माग गर्दै आएका थिए । तर उनको मागको कुनै सुनवाई भएको थिएन । त्यसो त, मृतक अर्यालका श्रीमतीले समेत मेघा बैंकका म्यानेजरलाई भेट गरी श्रीमान विरामी रहेको भन्दै पटक–पटक सरुवाका लागि अनुरोध गरेकी थिइन् ।
अर्कोतिर, उनीसंगै काम थालेका उनका सवै सहकर्मी र जुुनियर समेत बढुवा भइसकेका थिए तर उनको बढुवा गरिएको थिएन । आखिर के कारण थियो ? जसका कारण उनलाई मेगा बैंकले रसुवाको स्वाफ्रुवेसी सरुवा गर्यो ? किन उनको काठमाडौं फिर्ता हुने मागको सुनवाई भएन ? किन एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म रसुवास्थित शाखामा राखियो ? र, जुनियरको बढुवा गरी हाकिम बनाउदा मृतक अर्यालको बढुवा किन गरिएन ? यि प्रश्नका उत्तरहरु बैंकका सेलिब्रेटी सीईओ अनिल शाहलेसंग अन्य कर्मचारीहरुले खोजीरहेका छन् ।
बैंक स्रोतका अनुसार मृतक अर्यालका बुबा–आमा बृद्धबद्धा र विरामी थिए । उनीहरुको हेरचाह गर्न मानिस नभएको भन्दै मृतक अर्यालले काठमाडौं सरुवा मागेका थिए । अर्कोतिर, संगै जागिर खाएका उनका मित्रहरु बैंकमै हाकिम भइसकेका थिए । केही समय यतादेखि उनी निराश देखिन्थे । कतै यो रहस्यमय मृत्युको पछाडि बैंकको हात त छैन ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । यस विषयमा बैंकर शाहको मोबाइलमा बारम्बार सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल उठेन ।